Ihe ịhụ na obodo Vienna | Akụkọ Njem
Ihe ịhụ na obodo Vienna
Susana Garcia | | General, Vienna
Vienna nwere ike ọ gaghị abụ otu ebe kachasị ewu ewu, mana ọ bụ nke ndị hụrụ egwu n'anya na-ahọrọ, ebe ọ bụ ebe a mụrụ nnukwu ndị na-agụ egwu dịka Mozart, Beethoven ma ọ bụ Strauss, yana obodo nke oge ochie na-agwakọta na enweghị nsogbu. . Ebe omumu nke opera na obodo juputara na ihe mgbe ochie, ebe ọdịbendị bụ akụkụ nke akụkọ ntolite ya.
Ọ pụrụ ịbụ a-akpali nnọọ mmasị nleta ma ọ bụrụ na anyị na-amasị sook elu omenala ihe. Ma Vienna obodo ọ dị ọtụtụ karịa, ebe anyị nwekwara ike ịnwale gastronomy ya na-atọ ụtọ ma ọ bụ ịgagharị n'okporo ámá kachasị ọhụrụ na ịchọ ehihie nke ịzụ ahịa. Obodo nke anyi nwere ike ime ihe niile ma nwekwaa obi uto n'ebe ndi mmadu nwere mmasi.
1 Ringstrasse ahụ
2 Opera Vienna
3 Ndị omeiwu nke Ọstrịa
4 Palalọ uku nke Vienna
6 Mozlọ Mozart
7 Anulọ elu Danube
8 Na Naschmarkt
Ringstrasse bụ uzo ama ama site na obodo Vienna ma nwee akụkọ ihe mere eme. Kemgbe narị afọ nke XNUMX, mgbidi dị na obodo Vienna na-echebe ya, mana ka oge na-aga, ọ tolitere, yabụ n'ikpeazụ na narị afọ nke XNUMX, mbibi nke mgbidi ochie ahụ malitere wee wuo ụzọ a n'ọnọdụ ya. N’okporo ụzọ a ị nwere ike were otu trams ọdịnala, ọ bụkwa ebe kachasị mma iji bido nleta gị, ebe enwere ụfọdụ ebe ndị njem nlegharị anya, dịka Hofburg Royal Palace ma ọ bụ nzuko omeiwu.
Obodo Vienna bụ ebe kachasị mma maka ndị hụrụ opera n'anya Opera nke steeti Ọ bụ ihe kachasị mkpa ọ bụghị naanị na ọkwa Europe kamakwa na ọkwa ụwa. Enwere ike ịmegharị njem na ya, ọ bụ ezie na anyị nwekwara ike ịzụta tiketi ma iji lee ụlọ ahụ site n'ime ma hụ arụmọrụ. Na mgbakwunye, enwere ọnụ ụzọ mbata dị iche iche, ma ndị dị ọnụ ala anaghị adịkarị ihe karịrị euro ise, n'agbanyeghị na ụbọchị ụfọdụ anyị nwere ike ịkwụ n'ahịrị.
Ndị omeiwu nke Ọstrịa
Lọ omeiwu bụ nke a ụzọ a na-akpọ Historicism nke na-e emomi Gris oge ochie, ọbụna n'ime ime ya. Maka ndị hụrụ ndọrọndọrọ ọchịchị n'anya, ọ bụ nleta na-atọ ụtọ, ịhụ ebe etinyere iwu ahụ, ụlọ ahụ dịkwa mma. Ọ bụ ezie na ọ nwere ike ọ gaghị amasị ọtụtụ ndị, eziokwu bụ na ọ dị na Ringstrasse, yabụ anyị nwere ike ịkwụsị ngwa ngwa ebe ahụ.
Palalọ uku nke Vienna
Vienna bụ obodo ebe anyị na-eche banyere ndị ahụ obí eze mara mma, dị ka a ga-asị na ha bụ ihe e ji mara ya. Na e nwere n'ezie atọ na anyị ga-ahụ. Anyị na-ezo aka na Schönbrunn, Hofburg na Belvedere. Ha niile nwere ọmarịcha ụlọ, ọmarịcha ime ụlọ na ubi a kpụrụ iji nwee mmasị. Schönbrunn Obí bụ oge ezumike nke oge ezumike nke usoro eze nke Vienna, n'ime ya anyị nwere ike ịhụ ogige sara mbara ma na-agagharị na ya. Otu na Hofburg bụ ebe obibi nke Habsburgs na bụ ụkpụrụ ụlọ mgbagwoju na a uka, ngosi ihe mgbe ochie na ọbụna a ịnya ụgbọ akwụkwọ. Obí Belvedere na-abụkarị ihe na-adọrọ mmasị na mpụga, yana ubi ndị mara mma na Orangery, nnukwu iko griin haus.
Oge ntụrụndụ a nwere ogige ntụrụndụ kacha ochie si n’akụkụ nile nke ụwa, yabụ na ọ bụ ebe kachasị mma ma ọ bụrụ na ike gwụrụ anyị ọtụtụ nleta ọdịbendị ma na-achọ obere ntụrụndụ. Ọ bụ ebe dị iche, nwere ebe nlegharị anya nwere ikuku ochie pụrụ iche, ị nwere ike iji ụbọchị ahụ zuru oke na-agakwuru ha ma na-anụ ụtọ nri ngwa ngwa.
Wherelọ ebe Mozart dịrị ndụ Mụ na ezinụlọ ya ọtụtụ afọ na ụlọ ihe ngosi nka nwere ihe na-adọrọ mmasị gbasara onye na-ede egwu na onye na-agụ egwu, ọ bụ ihe kwesịrị maka ndị hụrụ egwu egwu oge gboo. N’ụlọ a ị nwere ike ịgagharị na ndụ nke Mozart, ebe ndị ọ nọrọ oge n’obodo Vienna ma ọ bụ ihe okike ya. Ọ bụ nleta naanị maka ndị chọrọ ịmụtakwu banyere Mozart.
Anulọ elu Danube
N'ọtụtụ obodo ndị dị na Europe anyị na-ahụ ụlọ nche ndị yiri ya. Ọ bụ a lollipop nke ị nwere ike hụperetụ n'ụzọ panoramic obodo ahụ dum. Wayzọ iji hụ obodo Vienna n'ụzọ dị mma, na ebe ntụrụndụ na-atọ ụtọ ịhụ oghere sitere n'elu ma were ụfọdụ foto na-adọrọ mmasị.
Nke a bụ otu n'ime Ahịa okporo ámá Vienna nke dị mkpa karị, ma n'ime ya anyị nwere ike ịchọta ntakịrị ihe niile, yana ụlọ nri, yana gastronomy na ụdị nri na ụlọ nke abụọ. N'akụkụ ahịa a, enwekwara ọtụtụ ụlọ oriri na ọ interestingụ interestingụ na-atọ ụtọ iji nwalee nri Vienna, yabụ, ọ bụ ebe kachasị mma iji nọrọ ụbọchị ahụ maka ịzụ ahịa na-atọ ụtọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » General » Ihe ịhụ na obodo Vienna
Njem nleta dị ọnụ ala na Reykjavík, Iceland
Inbọchị atọ na Jerusalem